IDandyLoop: Abelana Nabathengi Abaku-inthanethi Phakathi Kwezitolo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 6, 2014 NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Umkhuba ojwayelekile emikhakheni eminingi eku-inthanethi ukubambisana phakathi kwezinkampani ezahlukahlukene ezisebenza kuleyo nsimu, enkulu noma encane. Lokhu kuvame kakhulu kuzinhlelo zokusebenza zeselula, kumageyimu aku-inthanethi, kokuqukethwe kwamavidiyo, nakanjani kumasayithi wokuqukethwe. Kumasayithi wokuqukethwe sibona izincomo ezihlanganyelwe zokuqukethwe phakathi kwamasayithi, noma ngabe angabancintisana nabo. Kunzima ukuthola abaphathi abangeke basekele lo mkhuba. Noma kunjalo, kudinga izinga eliphezulu lokuvuthwa okuvela ezinkampanini ezisensimini - badinga ukuqonda ukuthi ukwaba akusikho ukunikela ngendlela eyodwa, kunamacala amabili - wonke umuntu uyaphumelela.
Yize ubenathi kusukela kwaqala i-intanethi, kuphela eminyakeni yamuva lapho imboni ye-eCommerce yaqala ukuzimela ngentando yeningi. Ukwanda kwamathuluzi we-SaaS kwenza ukuthi kuvulwe izitolo ezengeziwe eziku-inthanethi, futhi namuhla sezingaphezu kuka-12m zazo. Into eyodwa ebikade ilahlekile lapha umkhuba wokubambisana: izitolo zisaboshelwe ezinhlelweni zendabuko ezibizayo zokumaketha, futhi bafuna izindlela ezintsha zokufinyelela kulabo abangahle babe ngamakhasimende abo - ezenhlalo zaziyinto eyodwa, bese okuqukethwe. Manje bayabona ukubaluleka kokubambisana, kepha abanayo indlela yokukwenza.
Umkhuba omuhle kakhulu wokubambisana phakathi kwezitolo eziku-inthanethi usemikhiqizweni yabo eyinhloko yokuthengisa. Lapho nje izitolo ezimbili ezihambisanayo sezinquma ukusebenzisana futhi zincoma ngemikhiqizo yomunye nomunye, sibona i-CTR ephakeme kunanoma yini enye esiyaziyo ekukhangiseni kwendabuko (ngaphezu kwe-7% ngokwesilinganiso). Lokhu kungenxa yokuthi ngokungafani nokumaketha kwendabuko okuningi - lapha inani ku-shopper liyiqiniso - yilokhu akubhekayo lapho ethenga.
I-DandyLoop kwenza umkhuba wokubambisana kusetshenziswe ipulatifomu yokubambisana yezitolo eziku-inthanethi, lapho isitolo ngasinye singathola futhi simeme ezinye izitolo ukuthi zisebenzisane, okusho ukuthi zizoncoma ngokuhlanganyela emikhiqizweni yomunye nomunye. Lokhu kuhamba ngenye indlela futhi - isitolo ngasinye singatholakala futhi simenyelwe ukuhlanganyela nabanye. Bangakwazi ukuphatha umsebenzi wabo wenethiwekhi futhi babheke ukusebenza komlingani ngamunye.
Ukubambisana kusekelwe ekulinganeni, futhi kulapho i-algorithm yethu yokuphatha ilawula khona - kuso sonke isivakashi esinikezwa isitolo komunye wabalingani baso, sizothola isivakashi esisha sha. 1 for 1. Lokhu kwehlukile emhlabeni we-eCommerce: amakhasimende ethu awekho ebhizinisini lokuthengisa ithrafikhi ngemali, asebhizinisini lokuthengisa imikhiqizo - futhi yilokho esikunikezayo - ithrafikhi eningi, izivakashi eziningi, nokuthengisa okuningi.
Okwamanje i-beta ye- Thenga abasebenzisi, I-DandyLoop inikeza ukulawula okugcwele kwimikhiqizo yakho enconyiwe, imibiko esobala nokusetha okusheshayo nokulula!
Tags: i-dandyloopukukhuthazwa kwe-ecommercethengaukwabelana kwezivakashi